Smartphone Camera တွေမှာ Megapixel တွေဘာလို့များများသုံးလာသလဲ? - PX
Smartphone Camera တွေမှာ Megapixel တွေဘာလို့များများသုံးလာသလဲ?
၂၀၁၈ အထိ 12 MP မှာပဲ အများစုတဝဲလည်လည်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Smartphone Camera Trend ဟာ 2019 အရောက်မှာတော့ 48 MP ဆီကို တမဟုတ်ချင်း ခုန်တက်လာခဲ့တယ်။ လတ်တလောကြေငြာချက်တွေအရ Realme နဲ့ Redmi တို့ဟာ Samsung ကနေ အသစ်ထွက်ထားတဲ့ 64 MP ISOCELL GW1 Sensor ပါတဲ့ဖုန်းတွေထုတ်ဖို့တောင် စိုင်းပြင်းနေကြပြီ။ Xiaomi ဆိုရင် သူတို့ Conference မှာ Samsung နဲ့ပူးပေါင်းပြီး 108 MP Sensor ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီဆိုတာ အရိပ်အမြွက်ထုတ်ပြောသွားတယ်။ ဒီတော့ Megapixels များလာတဲ့ ဒီပြောင်းလဲမှုအပေါ် လက်ခံသူရှိသလို Marketing Terms ထက်မပိုတဲ့ Gimmick အဖြစ် မှတ်ယူထားသူတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။ ဒီ Article မှာတော့ ကိုယ်တွေအနေနဲ့ Camera တွမှာ Megapixel များများထည့်သုံးလာကြတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကို နားလည်သလောက်ရေးသွားပါ့မယ်။
Camera Trend တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ Smartphone Camera သမိုင်းမှာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုရမယ့် အတိတ်တစ်ချို့ကို အရင်စားမြုံ့ပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ Camera တစ်ခုရဲ့ Megapixel ထက် Pixel တစ်ခုစီရဲ့ Size က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပထမဆုံးချပြနိုင်ခဲ့တာက HTC ဆိုရင် ငြင်းကြမယ်မထင်။ အဲဒီခေတ်က HTC နဲ့ iPhone တွေရဲ့ Camera တွေဟာ ခေတ်ပြိုင်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် Megapixel အရ နည်းပါးပေမယ့် Quality ပိုင်းမှာ ကောင်းမွန်ခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းက “Ultrapixel” လို့ခေါ်တဲ့ Pixel Size ခပ်ကြီးကြီးတွေ သုံးထားခြင်းကြောင့်လို့ ပြောရမှာပဲ။ ဒုတိယအနေနဲ့ အဲဒီ Ultrapixel နည်းပညာကို ဆင့်ပွားယူပြီး Dual Phase Detection Autofocus (Dual PDAF) လို့ခေါ်တဲ့ Autofocus နည်းပညာကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Samsung ဟာလည်း ချီးကျူးထိုက်သူပါ။ ဒီနည်းပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့် Flagship Smartphone တွေရဲ့ 12 MP Camera အသုံးပြုမှုဟာသက်တမ်းရှည်ကြာခဲ့တယ်။
ဒီကြားထဲမှာ Dual Aperture လို သိပ်မတွင်ကျယ်တဲ့ Camera နည်းပညာတစ်ချို့လဲရှိခဲ့ပြီး Sony က စခဲ့တဲ့ Megapixel များများ သုံးတဲ့နည်းဟာလည်း အစပိုင်းမှာ အဲဒီထဲပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနှစ်မှာ Sony ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ Flagship ပေါ်မှာ 12 MP ကို ပြန်သုံးခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါဆိုရင် Sony ကိုယ်တိုင်တောင် မအောင်မြင်တဲ့ ဒီ Method ဟာ 2019 ရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး Trend တစ်ခု ဖြစ်လာရသလဲ?
အဖြေက Megapixel များများအပေါ် အသုံးချချဉ်းကပ်ပုံချင်း မတူခဲ့လို့ပါ။ Sony ရဲ့ 20 MP ဝန်းကျင် Sensor တွဟာ Image Resoultion ကို အသားပေးဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့် အလင်းနည်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ Pixel Size နည်းတဲ့ သူ့ Sensor ဟာ Noise များပြီး Detail လျော့တဲ့ဒဏ်ကို ခံရတော့တာပါပဲ။
ဒီ Megapixel နဲ့ Pixel Size နှစ်ခုလုံးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကို Sony ရော Samsung ပါ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကတော့ Pixel Binning နည်းပညာပါ။ အရောင်တူတဲ့ Pixel ၄ခုကို Pixel အကြီးတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပြီး Light Data ကို များများပိုဖမ်းနိုင်မယ့်နည်းကို စတွေ့ခဲ့တာကလည်း HTC ပါပဲ။ အစပိုင်းမှာ ဒီနည်းပညာကို Selfie Camera တွေမှာပဲ အဓိကသုံးခဲ့ကြပေမယ့် ၂၀၁၉ အရောက်မှာတော့ Main Camera တွေအတွက် အရေးပါတဲ့နည်းပညာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် 48 MP Sensor တွဘယ်လောက်ပါပါ တကယ်တမ်းကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သေးတာက 12 MP ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ဒါဆို Megapixel တွေ အများကြီးမတိုးပဲ 16 MP လောက်ကို Pixel Size ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ပါရော့လားဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အတွေးဝင်ခဲ့မိတယ်။
ဒါပေမယ့် Xiaomi ရဲ့ Conference မှာ 64 MP Samsung Sensor အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြသွားတဲ့အချက်တစ်ခုက ခုလို Megapixel များများသုံးရခြင်း ဇစ်မြစ်ကို သိမြင်စေခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ Pixel တစ်ခုစီကို အသုံးချပြီး High Dynamic Range (HDR) မြန်မာလိုဆိုရင် အလင်းအမှောင် ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံရိပ်နည်းပညာကို ခုထက်ပိုတိုးတက်စေဖို့ပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Dual PDAF နည်းပညာမှာ Pixel တစ်ခုချင်းရဲ့တစ်ဝက်စီကို အနီး၊ အဝေးပုံရိပ်တွေအတွက် ခွဲဝေအသုံးချကြတယ်။
ဒါပေမယ့် Samsung ရဲ့ 64 MP Sensor မှာတော့ Quad Bayer Arrangement မှာပါတဲ့ Pixel အကြီး ၄ခုထဲက Pixel တစ်ခုစီဟာ မတူညီတဲ့ Image Distance (ပုံရိပ်အကွာအဝေး) တစ်ခုစီအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် 3D HDR ဆိုတဲ့ နည်းပညာသစ် ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ Conference မှာ ရှင်းပြသွားပုံအရ အရောင်တူ Pixel ၄ခုမှာ နှစ်ခုက အလယ်အလတ်၊ တစ်ခုက အနီးနဲ့ နောက်တစ်ခုက အဝေးဆိုပြီး အကွာအဝေးအလိုက် မတူညီတဲ့ Light Data တွေဖမ်းယူဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်ရလဒ်ကတော့ အလင်း၊ အမှောင်ပိုကောင်းပြီး ရုပ်လုံးပိုကြွမယ့် HDR ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူပေးနိုင်တာပါပဲ။
ဒါဟာ သာမန် 16 MP Sensor နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် Sensor Size, Autofocus နဲ့ HDR ပိုင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းရည်ကို ပေးနိုင်မယ့် 64 MP Samsung Sensor ရဲ့ အားသာချက်တွေပါ။ ဆိုတော့ Pixel အရေအတွက်များများနဲ့ Pixel တစ်ခုစီကို မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးစုံ အသုံးချမယ့် ဒီနည်းလမ်းဟာ Smartphone Photography ကို ရှေ့တစ်ဆင့်လှမ်းတက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သလို 8K Video တွေအတွက် ခြေလှမ်းတာစူနေပြီဖြစ်တဲ့ Video နဲ့ Display တွေအတွက် အစကနဦးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (8K နဲ့ Megapixel များတဲ့ Camera ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲကတော့ အားမှပဲ အခွင့်သင့်သလိုပြောပြပါ့မယ်။) ဒါပေမယ့် များလာတဲ့ Megapixel တွေရဲ့ Full Quality ကို အကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်သေးတဲ့ စမ်းသပ်ကာလမှာ ဒီ Sensor တွေအပေါ် Marketing Term သက်သက်ပဲဆိုပြီး အမြင်စောင်းကြတာကလည်း လုံးဝမှားတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပြန်ပါဘူး။
ဒီလောက်ဆို Smartphone Camera တွေမှာ Megapixel များလာခြင်းဟာ 48 MP, 64 MP တို့ကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့ထက် Pixel တွေကို ၄ခုပေါင်းလျက်ရော၊ တစ်ခုစီခွဲလျက်ပါ အသုံးချရင်း ပိုကောင်းမယ့် 12 MP, 16 MP Image တွေ ရလာနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ Hint ပေးသွားတဲ့ 108 MP (27 MP * 4) ဆိုတာ လက်ရှိအနေနဲ့ လိုအပ်တယ်လို့ မယူဆပေမယ့် Samsung ရဲ့ 64 MP GW 1 Sensor ကတော့ Sony အပြင် Smartphone Camera နယ်ပယ်အတွက် ကောင်းမွန်တိုးတက်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ရင်း….
Realme X2 Pro မှာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး 64W Charging Technology ပါ၀င်လာနိုင်